श्रीपेच चोर्ने प्रयास गरेका घर्तीले प्रहरीसमक्ष दिए यस्तो अनौठो बयान, के भन्छिन दिदि ? — Sanchar Kendra
१एमालेले भन्यो- स्थानीय चुनाव पर धकेल्न पाइँदैन
२दशौँ सन्तानका रुपमा छोरी जन्मिएसँगै ३३ वर्षीया छत्यालले प्राण त्यागिन
३एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
४बाटो भुलेकी महिलालाई होटल पुर्याएर सामूहिक बला’त्कार
५न्यूनतमसँगै अधिकतम तापक्रम घट्दा चिसो ह्वात्तै बढ्यो
६आज देशभरका अदालत बन्द, यस्तो छ कारण
७कानपुरमा भइरहेको चोरी अमेरिकामा लाइभ देखियो, भारतभर हंगामा
८एन्टीबायोटिक औषधीले काम गर्न छोड्यो, संसारभरी लाखौँको मृत्यु-रिपोर्ट
९नेपालमा आज १० हजार २५४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि
१०घरमै आइसोलेसन बस्दा स्वास फेर्न गाह्रो भए के गर्ने ? थाहा पाउनुहोस ९ उपाय
११माओवादी केन्द्रले गर्यो यस्ता निर्णय
१२आइतबार देशभरका अदालत बन्द
श्रीपेच चोर्ने प्रयास गरेका घर्तीले प्रहरीसमक्ष दिए यस्तो अनौठो बयान, के भन्छिन दिदि ?
काठमाडाैं । नारायणहिटी दरबार संग्राहलय श्रीपेच चोर्न खोज्ने खेमबहादुर घर्तीले प्रहरीसँग अनौठो बयान दिएका छन् । प्रहरीसँगको सोधपुछमा घर्तीले आफूले श्रीपेच लगाएर राजतन्त्र ब्यूँताउन खोजेको बयान दिएका छन् । प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गका डीएसपी रामेश्वर पौडेलले भने, ‘आफूलाई राजा घोषणा गर्न चाहेको घर्तीले हामीसँग बयान दिएको छ । थप सोधपुछ जारी । मानसिक अवस्था ठिक नभएको जस्तो बुझिएको छ ।’
प्रहरीका अनुसार घर्ती वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा बहराइनबाट गत वर्षमात्र नेपाल फर्केका थिए । त्यसयता उनको मानसिक अवस्था ठिक नरहेको उनको परिवारले जनाएको डीएसपी पौडेलले बताए ।
शुक्रबार नारायणहिटी दरबार संग्राहलय हेर्न आउनेको घुँइचो लागिरहेको थियो । सयौँ मानिसहरु दरबारका विभिन्न कोठमामा पुगेर पूर्वराजपरिवारले प्रयोग गर्ने विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुको अवलोकन गरिरहेका थिए ।
यही भीडमा रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका–११ का २५ वर्षीय खेमबहादुर घर्ती पनि थिए । उनी श्रीपेच राखिएको कोठामा पुगे । त्यहाँ बुलेटप्रुफ सिसाको शोकेसमा श्रीपेच राखिएको छ । खुकुरी पनि शोकेसमा राखिएको छ । र त्यसको सुरक्षामा नेपाली सेनाका पाँचजना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।
श्रीपेच भएको कोठामा पुगेपछि घर्तीको चाल बदलियो । उनले खुकुरी राखेको शोकेस फुटाल्ने प्रयास गरे । खुकुरी निकाल्न खोजे । यो देखेपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा संग्राहलयका कर्मचारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए । घर्तीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि नेपाल प्रहरीको दरबारमार्ग प्रभागलाई बुझाइएको संग्राहलयका सूचना अधिकृत बुद्धी गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘त्यहाँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी तैनथ हुन्छन् । चोरी हुने सम्भावना छैन । तर अवलोकन गर्न सयौँ मानिससँगै आएका उनले (घर्ती) ले खुकुरी राखेको सिसाको शोकेस फुटाल्ने प्रयास गरेपछि हामीले उनलाई नियन्त्रणमा लियौँ।’ घर्तीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यता प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी उनकी दिदीले भने उनको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि बहराइन पुगेका घर्ती एक वर्षअघि नेपाल फर्किएका थिए । दुई वर्ष बहराइन बसाईका क्रममा उनीमाथि कुटपिट भएको थियो, यसले उनको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेकाले नियमित औषधि लिइरहेका छन् ।
मैपी बस्ने खेमबहादुरकी दिदीले प्रहरीलाई बताए अनुसार स्वदेश फर्किए यता खेमबहादुर कहिले रुकुम पश्चिममा रहेको आफ्नो घर त कहिले काठमाडौं बस्दै आएका छन् ।
अपराध सँग सम्बन्धित
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
बाटो भुलेकी महिलालाई होटल पुर्याएर सामूहिक बला’त्कार